Global Voices teny Malagasy » Hofehezina tahaka ny fampitam-baovao ihany koa ny bilaogy Rosiana atsy ho atsy? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 10 Avrily 2019 4:33 GMT 1	 · Mpanoratra Andrey Tselikov Nandika (ru) i GV Russian, Miriam Palisson, Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Fahalalahàna miteny, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Teknolojia, Zon'olombelona, Akon'ny RuNet
Ny 7 aprily 2014, depioté roa ao amin'ny Douma Rosiana no nampahafantatra  fa hanolotra volavolan-dalàna hifehy ny vaovao ao amin'ny aterineto izy ireo. Nametraka volavolan-dalàna i Andreï Lougovoï sy Vadim Denguine (samy liberaly-demokraty) mba hiharan'ny fitsipika mitovy amin'ny an'ireo fampitam-baovao Rosiana ny bilaogera izay manana mpamaky maherin'ny 3000. Ohatra : fanamarinana ny fahamarinam-baovao, fanajana ny fetra taona sy ny fitsipika amin'ny fotoana mialoha ny fifidianana.
Nampahafantarin'i Vadim Denguine tao amin'ny vavahadim-baovao TJournal  ihany koa izany, hofaritana amin'ny isan'ny mpitsidika ny isan'ireo mpamaky, ary esorina ao anatin'ny fanisana ny “roboto” rehetra. Araka ny filazan'i Selon Denguine, manana ny fitaovana rehetra ilaina hanaovana ireo kajikajy mikasika ireo bilaogy mahomby ny Roskomnadzor, sampana mifehy ny fampitam-baovao ao Rosia.
Noho ny antony mazava, tsy faly tamin'izany fanambarana izany ireo bilaogera rosiana. Nihevitra ny sasany fa dingana fanampiny mankany amin'ny fifehezana hatrany ny tontolon'ny bilaogy “mpikomy” ilay volavolan-dalàna. Nanoratra  ilay mpanao gazety sady bilaogera Oleg Kozyrev, izay manana “namana” maherin'ny 8000 ao amin'ny bilaoginy “LiveJournal” ary mpanjohy maherin'ny 46 000 ao amin'ny Twitter fa natao hanohintohina ny zon'ny bilaogera haneho malalaka ny hevitr'izy ireo manokana ilay volavolan-dalàna. Mazava amin'ny rehetra, hoy i Kozyrev fa natao “hanoherana ny bilaogy ara-tsosialy sy ara-politika sy ireo mpanoratra, ary hanoherana ny tetikasan'ny olom-pirenena sy ny tontolo iainana ireo fepetra ireo”.
Tohina  ihany koa ilay mpaka sary sady manam-pahaizana momba ny fifandraisana amin'ny gazety, Marat Gelman :
Na dia izany aza, nisy bilaogera iray farafaharatsiny nihevitra  fa ilaina ny lalàna tahaka izany, raha lany. Raha tsy miditra amin'ny tetikareo hanao hosoka amin'ny hetra, mampiely torohay tsy famoaka ampahibemaso na fanalam-baraka, dia tsy tokony hanahy ianao hoy i Oleg Lourié. Ankoatra izay, raha te-hanakatona bilaogy ny governemanta, dia efa manana ny fahefana izy. Ary misy lafiny tsara ihany koa: raha hampitoviana amin'ny fampitam-baovao ny bilaogy, dia ho voatery hamaly ny fangataham-baovaon'izy ireo sy hiara-hiasa amin'ny bilaogera tahaka ny ataony amin'ireo mpanao gazety ny andrim-panjakana.
Na izany na tsy izany, tsy resy lahatra ny ankamaroan'ny mpiserasera mikasika ny fahombiazan'ny volavolan-dalàna tahaka izany ary mihevitra fa miteraka olana be loatra ny famerana ny fahalalahana amin'ny zo hiteny. Araka ny nolazain'ilay mpiasan'ny banky taloha sady bilaogera malaza Roman Adveev :
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/04/10/136875/
 no nampahafantatra: http://www.vedomosti.ru/politics/news/24982021/pravo-na-obyazannosti
 nanoratra : https://www.facebook.com/ivan.zassoursky/posts/10200879241822102
 Roman Adveev: http://avdeev-roman.livejournal.com/291115.html